ओली बैठकमा नआए कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छु – प्रचण्ड…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक २५, २०७७ मंगलबार 0
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेल पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सन्देश बोकेर बालुवाटार फर्किएका छन्। सचिवालय बहुमत सदस्यले दिएको पत्रमा तोक लगाउँदै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महासचिव पौडेललाई दूतको रूपमा आज बिहान खुमलटार पठाएका थिए।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कात्तिक २२ गते सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्ष ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए। उनीहरुले दुई दिनभित्र सचिवालय बैठक बोलाउन अल्टिमेटम दिएका थिए।
प्रचण्डले आफूसँग सचिवालय वा स्थायी समिति बैठक बोलाउने अधिकार भए पनि सहमतिका लागिमात्र अध्यक्ष ओलीलाई लिखित पत्र दिएको बताएका थिए। उनले विधानको प्रावधान यो प्रसंगमा आकर्षित नहुने पनि बताएका थिए। आज पनि अध्यक्ष प्रचण्डले महासचिव पौडेलमार्फत पार्टी एकताका बाँकी काम ओलीले रोकेर पार्टी विभाजनका लागि गरेका विभिन्न कामको स्मरण गर्दै भनेका छन्
उहाँले सुरुवातदेखि नै पार्टी विभाजनका लागि प्रयास गर्दै आउनु भएको छ। नेकपा एमाले दर्तादेखि, भेलासम्म आइपुग्दा उहाँले पटक पटक मेरो अपमान गर्नु भएको छ। तर, मैले पार्टी एकतालाई कायम राख्नका लागि अनेकौँ प्रयास गरेको छु। कार्यकारी हैसियतमा बैठक नबोलाएर पार्टी एकताको पक्षमा काम गर्दा पनि उहाँले अपमान गर्नु भएको छ।’
महासचिव पौडेलमार्फत ओलीले पार्टी बैठक १५ दिनपछि मात्रै बस्न सक्ने सङ्केत गरेका थिए। तर, प्रचण्डले भोलिसम्म बैठक नबसेमा प्रक्रियागत हिसाबले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका स्रोतको भनाइ छ। पौडेलसँग प्रचण्डले भने, ‘बैठकका लागि म लगायतका साथीहरूले आग्रह गरेको हो। कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर मैले आफै बैठक बोलाउन सक्छु।
पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने प्रयासलाई पनि उहाँले खिल्ली उडाउनु भएको छ। १५ दिन होइन, भोलिसम्ममा बैठक बस्नुपर्छ।’ पार्टीमा अल्पमत रहेका ओलीले पछिल्लो समय लगातार आन्तरिक समीकरण फेरबदलको कोसिस जारी राखेका छन्। यही विवादका बीच ओलीले नेपालसँग तीन पटक भेट गरिसकेका छन्। नेपाललाई फकाउन दोस्रो तहका नेताहरुसमेत परिचान गरेका ओलीले आफ्ना दूत मार्फत प्रदीप नेपाललाई नेपाल फकाइदिन अनुरोधसमेत पठाएका थिए।
आइतबार दिउसो पनि ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, रघुजी पन्त, सुरेन्द्र पाण्डेसहित बालुवाटार बोलाएका थिए। उक्त भेटमा ओलीले पार्टी संकटमा रहेकोले जोगाउन नेता नेपालसँग आग्रह गरेका थिए। नेता नेपालले सोहिक्रममा पार्टी जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रस्ताव के छन् राख्न आग्रह गरेका थिए।
सोही भेटमा नेता नेपालले भनेका थिए, ‘एकता जोगाउने तपाईको जिम्मेवारी हो। जोगाउनुस्।’ स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएको लगायत विषयमा नेकपाका पाँच सचिवालय सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। नेता नेपालले लगातार पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउन माग गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई भेटेर सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
Prevप्रदेश १: प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सजिलै हटाउन सक्छ मुख्यमन्त्री…हेर्नुहोस् ।
Nextनेता नारायणकाजीले प्र.म ओलीलाई भारतीय द’लाल भनेपछि…
मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ ! अपनाउनुस यस्ता उपायहरु ।(भिडियो सहित)
राज’तन्त्र पुन-र्स्थापनाको जुलु’समा सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई सरकारको आग्रह…हेर्नुहोस् ।
हार्दिक बधाई ! धनुषाका दुई नेपाली वैज्ञानिक ईन्जिनियर अमेरिकामा उच्च वैज्ञानिक पुरस्कारले सम्मानित…हेर्नुहोस् ।